Maodzanyemba Smoosier Tech Kirabhu | Martech Zone
Muvhuro, July 7, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndingangodaro ndainakidzwa zvakanyanya neMovie on iyi vhidhiyo! Uyu waive musangano wekutanga weSouthside Smoosier Tech Club pa Mukombe weBean.
Joinha kirabhu pamusoro pa Mudiki Indiana. Tichakuona mwedzi unotevera!
Tags: nharembozha email dhizainitravel industry
Jul 7, 2008 na11:59 PM
ZVAKANAKA! Kurumidza kugadzirisa basa zvakare. Ndaigona kusangana bi-weekly kana pamwedzi. Ndinovimba handizove nemitambo yeSoftball yakawandisa yakapetwa kaviri mune ramangwana.
Jul 8, 2008 pa 12: 38 AM
Hurukuro yakanaka, yakanakidzwa chaizvo nemusangano wekutanga. Akataura nezve zvese kubva kuHaliburton kuenda kuVOIP.
Jul 8, 2008 pa 9: 17 AM
Inofanirwa kunge yakashandisa 'Southside' neCommon feat. Kanye West. Pamwe mwedzi unouya? 🙂
Jul 8, 2008 na1:22 PM
Woo-hoo, ndine mukurumbira. Vhidhiyo yakanaka. Kugadzirisa kwakanaka.